FAQs - Danyang NQ खेल र स्वास्थ्य कं, लिमिटेड
म सामान को लागी उद्धरण कहिले पाउन सक्छु?
सामान्य मा, हामी तपाइँलाई २४ घण्टा भित्र उद्धृत गर्नेछौं पछि हामी तपाइँको सोधपुछ पाउँछौं। यदि यो धेरै हतार छ, pls अनलाइन संचार, trademanger वा टेलिफोन संग हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
उत्पादन मूल्य लोगो समावेश गर्दछ? म कसरी मेरो कस्टम लोगो र प्याकेजि make्ग बनाउन सक्छु?
सूचीबद्ध उत्पादन मूल्य लोगो समावेश गर्दैन, उत्पादन सामान्यतया पाली झोला प्याकेजि use्ग प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाइँ लोगो वा कस्टम प्याकेजि need्ग चाहनुहुन्छ भने तपाइँ विशिष्ट मूल्य को लागी हाम्रो बिक्री लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
के हामी आदेश भन्दा पहिले पुष्टि गर्न को लागी एक नमूना प्राप्त गर्न सक्छौं?
हो, यो कुनै समस्या हुनेछ एक नमूना पुष्टि गर्न को लागी हामी दुबै मूल्य मा सहमत हुनु भन्दा पहिले! नमूना लागत र ढुवानी शुल्क ग्राहकहरु बाट स collected्कलन गरिनेछ, निस्सन्देह, हामी तपाइँलाई नमूना लागत फिर्ता गर्नेछौं हामी बाट अर्डर पछि। !
के तपाइँ हाम्रो आफ्नै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, कुनै समस्या छैन! तपाइँ मात्र हामीलाई छविहरु आपूर्ति ठीक छ, हाम्रा डिजाइनरहरु तपाइँको छविहरु अनुसार तपाइँको जाँच को लागी शिल्प छविहरु गर्नेछन्!
कसरी भुक्तानी सर्तहरु को बारे मा?
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, पैसा ग्राम, र यति मा।